ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သင်္ချာ) ဘာသာပြန် - 8. Saturn Rising - စနေဂြိုဟ်ထွက်ချိန် - MoeMaKa Media
Home / Arthur C. Clarke / Dr Khin Maung Win (Maths) / Translation / Variety / ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သင်္ချာ) ဘာသာပြန် - 8. Saturn Rising - စနေဂြိုဟ်ထွက်ချိန်
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သင်္ချာ) ဘာသာပြန် - 8. Saturn Rising - စနေဂြိုဟ်ထွက်ချိန်
Arthur C. Clarke, Dr Khin Maung Win (Maths), Translation, Variety
(မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၂၀
စနေဂြိုဟ် (Saturn) သည် မိုင်ပေါင်း ၉၃၆ နှင့် ၈၃၆ သန်းကြားတွင် နေကို လှည့်ပတ်လျက်ရှိ သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပတ်နေစဉ် ကမ္ဘာနှင့် အနီးဆုံးအချိန်တွင် မိုင်ပေါင်း ၇၄၅ သန်း ကွာဝေးပြီး အဝေးဆုံးအချိန်တွင် နောက်ထပ် သန်း ၁၀၀ ထပ်မံ၍ ကွာသည်။ စနေဂြိုဟ်၏ အချင်းသည် မိုင်ပေါင်း ၇၃၀၀၀ ရှိသည်။ စနေဂြိုဟ်သည် အရွယ်အားဖြင့် ကမ္ဘာ၏ ၇၆၃ ဆ ရှိသော်လည်း အလေးချိန်အားဖြင့် ၉၅ ဆသာ ရှိသဖြင့် အရွယ်နှင့် နှိုင်းစာလျှင် ပေါ့သည်ဟု ဆိုရမည်။ ၎င်းကို ရေထဲသာ ထည့်လို့ရခဲ့လျှင် ရေပေါ်တွင် ပေါ်နေလိမ့်မည်ဟု မှန်းသည်။ စနေဂြိုဟ်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဆွဲငင်အားသည် ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အားနှင့် သိပ်မကွာချေ။ စနေဂြိုဟ်ပေါ်တွင် အအေးဒီဂရီသည် သုညအောက် ၂၄၀˚F ရှိသဖြင့် အလွန်အေးသည်။ စနေဂြိုဟ်တွင် လ ဆယ်ခု ရှိသည်။
စနေဂြိုဟ်၏ အထူးခြားဆုံးအရာမှာ ၎င်းကို လှည့်ပတ်နေသော ကွင်းများ ဖြစ်သည်။ စနေဂြိုဟ် ၏ မျက်နှာပြင်မှ စတင်၍ ရေတွက်လျှင် ကွင်းများသည် သုံးထပ်ရှိသည်။ စနေဂြိုဟ်နှင့် အနီးဆုံး ကွင်းနှင့် အဝေးဆုံးကွင်းတို့သည် အနည်းငယ်မှိန်ပြီး အလယ်ကွင်းသည် အတောက်ပဆုံး ဖြစ် သည်။ ကွင်းများထဲတွင် ကျောက်ခဲများ၊ ရေခဲတုံးများ၊ သဲမှုန်များ၊ ဓာတ်ငွေ့များ ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့ သည် ဂြိုဟ်ကို လှည့်ပတ်နေကြသည်။ တောက်ပမှုပမာဏမှာ နေရောင်ကျရောက်ပြီး အလင်း ပြန်သည့် ဦးတည်ဘက်အပေါ် တည်သည်။
ကျွန်တော်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က မောရစ်ပါ(လ်)မင် (Morris Perlmon) နဲ့ တွေ့ခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော်ဟာ အသက် နှစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ စနေဂြိုဟ်ကို ပထမဦးဆုံး ခရီးထွက်ခဲ့ပြီး ပြန်လာခဲ့တာ ခြောက်ပတ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံအနှံ့ ခရီးသွားပြီး စနေဂြိုဟ်ခရီးနဲေပတ်သက်တဲ့ အကြောင်း အရာတွေကို ဟောပြောနေခဲ့ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ ဒီခရီးအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ နားထောင်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ ဟိုတယ်တခုမှာ နေနေပါတယ်။ အဲဒီဟိုတယ်လေးဟာ နေလို့ အဆင်ပြေပြီး ဈေးလည်းသက်သာပါတယ်။ ကျွန်တော် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဟိုတယ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ နံနက်စာ စားနေတုန်း အသက်လေးဆယ်ကျော်ရှိတဲ့ လူတယောက်ဟာ ကျွန်တော့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ လာထိုင်ပါတယ်။
“ကောင်းသော နံနက်ခင်းပါ ခင်ဗျာ” ဟု သူက နှုတ်ဆက်ပြီး ဆက်ပြောပါတယ်။
“မနေ့ညက ခင်ဗျားရဲ့ ဟောပြောပွဲကို ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားပါတယ်”
ကျွန်တော်ဟာ နံနက်စာ စားချိန်မှာ တယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေးပဲ စားချင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ မေးခွန်းတွေကို မဖြေချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မစ္စတာပါ(လ်)မင်က ကျွန်တော့်ကို မေးခွန်း တွေ မေးဖို့ လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူက တခုခု ပြောချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက စနေဂြိုဟ်ကို သိပ်သဘောကျပါတယ်။ စနေဂြိုဟ်ရဲ့ ပုံကို မြင်ဖူးပါ တယ်။ စနေဂြိုဟ်ဘေးက ကွင်းတွေက တော်တော်လှတာပဲ။ ကျွန်တော်ဟာ ဒီကွင်းတွေကို ကိုယ်တိုင် မြင်ချင်တာနဲ့ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းတခုကို လုပ်တယ်။ ခင်ဗျားကော… အဝေး ကြည့်မှန်ပြောင်း လုပ်ဖူးလား”
ကျွန်တော် ခေါင်းခါပြီး ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
“ကျွန်တော်က အင်ဂျင်နီယာတယောက်ပါ။ နက္ခတ္တပညာရှင် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းတွေ အကြောင်းကို သိပ်မသိပါဘူး”
“အေးလေ၊ ထားပါတော့။ ကျွန်တော့်အကြောင်း ဆက်ပြောရရင် ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက ပိုက်ဆံလည်း သိပ်မရှိဘူး။ စနေဂြိုဟ်ရဲ့ ကွင်းတွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင် တွေ့ချင်တယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ စာကြည့်တိုက်ကို သွားတယ်။ သိပ္ပံစာအုပ်တအုပ်ထဲမှာ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း လုပ်နည်း လိုက်ရှာဖတ်တယ်။ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းကို တကယ် လုပ်ကြည့်တော့ တော်တော်ကြာသား။ ရက်သတ္တပတ် တော်တော်ကြာတော့ ဖြစ်လာပါတယ်”
ကျွန်တော်ဟာ ဒီလူကို စိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။ သူဟာ အခြားလူတွေနဲ့ မတူတာကို တွေ့ရပါ တယ်။ သူက အောက်ပါအတိုင်း ဆက်ပြောတယ်။
“အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း လုပ်ပြီးသွားတဲ့ညက စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကို ခံစားရတာကို မှတ်မိတယ်။ တကယ်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာပဲ။ အဲဒီညမှာ ကိုယ့်မှန်ပြောင်းနဲ့ကိုယ် စနေဂြိုဟ်ကို ကြည့်ရတော့ မယ်။ ကျွန်တော်ဟာ မှန်ပြောင်းကို ခေါင်မိုးပေါ် ယူသွားပြီး ချိန်ထားတယ်။ ကျွန်တော့်အမေက ဈေးသက်သာတဲ့ ဟိုတယ်လေးတခုမှာ မန်နေဂျာ လုပ်တယ်။ ဟိုတယ်က နယူးယောက်က နံပါတ်သုံးရိပ်သာမှာ ရှိတယ်။ အဲဒီဟိုတယ်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ မိသားစု နေကြတယ်။ အလုပ် လည်း လုပ်ကြတယ်။ ပိုက်ဆံတော့ သိပ်မရပါဘူး။ ကျွန်တော့်အဖေကလည်း ပိုက်ဆံအတွက် အမြဲ စိတ်ပူနေတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ ဟိုတယ်မှာ ကူလုပ်ရပါတယ်။ အဲဒီညမှာ ကျွန်တော်က ဧည့်ကြိုအလုပ် လုပ်ဖို့ တာဝန်ကျတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီညက မေ့နေတယ်။ ကျွန်တော်က ခေါင်မိုးပေါ်မှာ အဝေးကြည့် မှန်ပြောင်းနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။
ကောင်းကင်ကြီးဟာ ကြယ်တွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်။ အဲဒီကြားထဲမှာ စနေဂြိုဟ်ကို တော်တော်ရှာရ တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ တွေ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ စနေဂြိုဟ်နဲ့ သူ့ဘေးက တောက်ပနေတဲ့ ကွင်းတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စနေဂြိုဟ်ရဲ့ လတွေထဲက တိုက်တင် (Titan) ကိုလည်း မြင်ရပါတယ်။ တကယ် အံ့မခန်းတဲ့ ရှုကွင်းပါပဲ။ ကွျန်တော်ဟာ ခေါင်မိုးပေါ်မှာ တော်တော် ကြာကြာ ထိုင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့်အဖေ၊ ဟိုတယ်နဲ့ နယူးယောက်မြို့ကြီးကိုပါ မေ့နေပါ တယ်။
ဒါပေမဲ့ အဖေက ကျွန်တော့်ကို မမေ့ဘူး။ သူက ကျွန်တော့်ကို လိုက်ရှာနေတယ်။ စိတ်လည်းဆိုး နေတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ကို ခေါင်မိုးပေါ်မှာ တွေ့တော့ အရမ်းစိတ်ဆိုးသွားတယ်။ ကျွန်တော့် အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း ကွဲသွားတဲ့အသံကို အခုထိ မမေ့နိုင်ဘူး။ ဒါဟာ ကျွန်တော် လုပ်တဲ့ ပထမဦးဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံး အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းပါပဲ။ နောက်ထပ်တစ်ခုလည်း မလုပ်ဖြစ်ပါ ဘူး။
တကယ်တော့ ကျွန်တော့်အပြစ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်က ဧည့်ကြို စားပွဲကောင်တာမှာ ကူရမှာ။ အဖေ က ဒီမှန်ပြောင်းဟာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လုပ်ထားတာ ဆိုတာကို မသိဘူး”
မစ္စတာပါ(လ်)မင်ဟာ ခဏ ဘာမျှ မပြောဘဲ ထိုင်နေတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး ပြုံးလိုက်တယ်။ သူက ဤသို့ ဆက်ပြောတယ်။
“နောက် မကြာခင်မှာ အခြေအနေတွေ ပြောင်းသွားတယ်။ အဖေက အိမ်ကနေ ထွက်သွား တယ်။ ကျွန်တော်က ဟိုတယ်မန်နေဂျာ ဖြစ်တယ်။ ဟိုတယ် တည်ထားတဲ့ အဲဒီရပ်ကွက်ဟာ ခေတ်မီ တိုးတက်လာတယ်။ ဟိုတယ်ကလည်း ဝင်ငွေ တော်တော်ကောင်းလာတယ်။ ဒါနဲ့ နောက်ထပ် ဟိုတယ်တခု ဝယ်တယ်။ ပြီး နောက်တခု ထပ်ဝယ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ တဝန်းမှာ ဟိုတယ်တွေ အများကြီး ဖြစ်လာတယ်။
ဒါပေမဲ့ စနေဂြိုဟ်ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အချစ်ဟောင်းလေးပမာ မမေ့နိုင်တဲ့ အရာတခု ဖြစ်နေဆဲ ပါ။ ခင်ဗျားရဲ့ ဟောပြောပွဲတွေကို နားထောင်လိုက်တော့ အဲဒီ ငယ်က အချစ်ဟောင်းလေးကို ပိုပြီးသတိရစေတာပေါ့။ စနေဂြိုဟ်ကို ကိုယ်တိုင် လုပ်တဲ့ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့ ပထမဦးဆုံး မြင်ခဲ့ရတာကို ပြန်ပြီးသတိရမိတယ်။ ခင်ဗျားလည်း စနေဂြိုဟ်ကို သွားဦးမယ်လို့ ကြားပါတယ်။ ပြန်လာရင် ကျွန်တော့်ဆီကို အကြောင်းကြားပါ။ အားလုံး အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပါ တယ်”
သူက ပြုံးရင်း ထွက်သွားပါတယ်။
ကျွန်တော် နံနက်စာစားပြီးတော့ အရောင်းစာရေးမကို အဲဒီလူနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးကြည့်တယ်။ အရောင်းစာရေးမက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“သူက မစ္စတာပါ(လ်)မင်လေ။ ဒီဟိုတယ်ကို သူ ပိုင်တာပေါ့”
ကျွန်တော်က မစ္စတာပါ(လ်)မင်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်မေးတဲ့အခါ ဆက်လက်သိရတာ ကတော့ မစ္စတာပါ(လ်)မင်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အရေးအပါဆုံးသော ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချမ်းသာဆုံး လူတယောက်လည်း ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်တယ်။
နောက်ငါးနှစ် ကြာတော့ ကျွန်တော် စနေဂြိုဟ်ကို နောက်တခေါက် သွားပါတယ်။ စနေဂြိုဟ် ပေါ်က လ ဆယ်ခုစလုံးပေါ်ကနေ ကွင်းတွေကို အနီးကပ် လေ့လာခွင့်ရရှိပါတယ်။ အဲဒီက အပြန်မှာ ဟောပြောပွဲတွေ ထပ်လုပ်ပါတယ်။ မစ္စတာပါ(လ်)မင်နဲ့ ထပ်တွေ့ပါတယ်။ ဒီတခါမှာ တော့ သူက ကျွန်တော့်ကို ညနေစာ ခေါ်ကျွေးပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ရဲ့ စနေဂြိုဟ်ခရီး အကြောင်းကို အသေးစိတ် မေးပါတယ်။
“စနေဂြိုဟ်ဟာ တော်တော်လှသလား” လို့ သူက မေးတော့ ကျွန်တော်က–
“တကယ့်အိပ်မက်ထဲကလိုပါပဲ” လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။
ကျွန်တော်က စနေဂြိုဟ်အကြောင်း၊ ကွင်းတွေအကြောင်း၊ လတွေအကြောင်းကို ပြောပြပါ တယ်။ ကွင်းတွေဟာ ရေခဲမှုန့်တွေ ပျံသန်းနေတာ ဖြစ်လို့ ဒီကွင်းတွေကို ဖြတ်ပြီး ဒုံးပျံယာဉ်နဲ့ သွားလို့ရပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ မစ္စတာပါ(လ်)မင်က သူ မေးချင်နေတဲ့ မေးခွန်းတခုကို အခုလို မေးလိုက်ပါတယ်။
“အကယ်၍ ဟိုတယ် ဆောက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လပေါ်မှာ ဆောက်ရင် ကောင်းမလဲ”
ကျွန်တော်က တော်တော်အံ့ဩသွားပါတယ်။ အခုလို ပြန်ဖြေပါတယ်။
“အဲဒီမှာ ဟိုတယ်ဆောက်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်တယ်။ သိပ်ဝေးလွန်းတယ်။ အဲဒီမှာ လူတွေ နေလို့မရသေးဘူး။ ဟိုတယ်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ဟိုတယ်ထဲမှာ အစစအရာရာ၊ ကမ္ဘာက အခြေ အနေမျိုးကို ဖန်တီးထားရမှာ။ ကုန်ကျစရိတ် သိပ်များလွန်းတယ်”
သူက ပြုံးပြီး ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
“အခုတော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက် လေး ငါးနှစ်လောက်အတွင်း မှာ ဖြစ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းတရာလောက်က လူတွေဟာ လပေါ်ကိုတောင် သွားမယ်လို့ မထင်ခဲ့ကြဘူး။ အခုအခါမှာ အာကာသထဲကို တော်တော်ဝေးဝေး သွားနိုင်နေပြီ။ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင် စနေဂြိုဟ်ကို ရောက်ခဲ့ပြီ။ ဒီတော့ ခင်ဗျားရဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ပြောပါဦး။ လ ဆယ်ခုထဲက ဘယ်လပေါ်မှာ ဟိုတယ်ဆောက်ရင် အကောင်းဆုံးလဲ”
ကျွန်တော် စဉ်းစားပြီး အခုလို ဖြေလိုက်ပါတယ်။
“လတွေက အများပြီးပဲ။ အချို့က သိပ်ငယ်လွန်းတယ်။ ဆွဲငင်အားက နည်းလွန်းလို့ လေထုကို ဆွဲမထားနိုင်ဘူး။ အချို့က စနေဂြိုဟ်နဲ့ နီးလွန်းအားကြီးတယ်။ အရွယ်အစားကော၊ အကွာအဝေး ကော၊ အနေအထား အကောင်းဆုံးက တိုက်တင် (Titan)ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ တိုက်တန်ဟာ ဆွဲငင်အားနဲ့ အအေးဒီဂရီ အသင့်အတင့်ရှိတာကြောင့် လေထုကို ဆွဲထားနိုင် တယ်။ ဒါပေမဲ့ လေထုဟာ နိုက်ထရိုဂျင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိလို့ အသက်ရှူလောက်အောင် တော့ မရှိဘူး။ တိုက်တန်ရဲ့ ထက်ဝက်လောက်ဟာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပင်လယ်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ ဟိုတယ် ဆောက်ရင်တော့ မြေကြီးရှိတဲ့ဘက်မှာ ဆောက်ရမယ်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပင်လယ်ကြီး ရှိတာကြောင့် စွမ်းအင်တွေ သုံးမကုန်အောင် ထုတ်ယူနိုင်တယ်။ အဲဒီစွမ်းအင်ကို သုံးပြီး ဟိုတယ်အတွင်းမှာ လူနေနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ဖန်တီးနိုင်မလားတော့ မသိဘူး။ ဒါက တော့ နည်းပညာပိုင်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ကာ ဟိုတယ်ဆောက်ချင်ရင် တိုက်တန်ဟာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ ထင်ပါတယ်။”
တကယ်တော့ မစ္စတာပါ(လ်)မင်ဟာ သိပ်ကို စိတ်အားထက်သန်နေလို့သာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြောနေတာပါ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ဒီဟိုတယ်ကို ဆောက် ဖြစ်မယ်လို့ မထင်ခဲ့ပါဘူး။
အခုတော့ ကျွန်တော် ထင်တာ လွဲသွားပါပြီ။
အခု လူကြီးမင်းများ ရောက်နေတဲ့ ဟိုတယ်ဟာ မစ္စတာပါ(လ်)မင်ရဲ့ ဟိုတယ်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်ကို တိုက်တန်မှာ ပထမဦးဆုံး ဆောက်တဲ့ ဟောဒီဟိုတယ်မှာ မန်နေဂျာ ခန့်လိုက်ပါတယ်။
အခု လူကြီးမင်းများကို ဒီဟိုတယ်ရဲ့ အာကာသပြခန်းဆီကို ခေါ်သွားပါတော့မယ်။ အဲဒီမှာ စနေဂြိုဟ် ပေါ်ထွက်လာတာကို အနီးကပ်ဆုံး မြင်ကြရပါလိမ့်မယ်။ စနေဂြိုဟ်နဲ့ သူ့ဘေးက ကွင်းတွေ ထွက်လာတဲ့ မြင်ကွင်းဟာ အံ့မခန်းပါပဲဗျာ။ စနေဂြိုဟ်ကြီးကို မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းရဲ့ ထက်ဝက်နီးပါးလောက် မြင်ရမှာပါ။ ဒီမြင်ကွင်းကို ကျွန်တော်ဟာ ခဏခဏ မြင်ရပေမယ့် အခုထိ ကြည့်လို့မရိုးနိုင်ပါဘူးဗျာ။ အခု ကျွန်တော်နဲ့အတူ လိုက်ကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သင်္ချာ) ဘာသာပြန် - 8. Saturn Rising - စနေဂြိုဟ်ထွက်ချိန် Reviewed by MoeMaKa on 7:00 AM Rating: 5